10x30 पोडकास्ट: आईओएस १ and र नयाँ आईफोन्सका लागि तयार हुँदै आईफोन समाचार
१० × P० पोडकास्ट: आईओएस १ and र नयाँ आईफोनहरूको लागि तयार हुँदै
अर्को हप्ता हामी सेप्टेम्बरमा सुरू हुने नयाँ आईफोनको बारेमा अफवाहहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं, केही छविहरू देखाउँदै उनीहरूको डिजाइन के हुनेछ भनेर अनुमान गर्न को लागी प्रयास गरिरहेका छन। हामी आईओएस १ and र यसको पुरानो उपकरणहरूसँग अनुकूलताको बारेमा पनि कुरा गर्छौं, जसले आईफोन एसई प्रयोगकर्ताहरूको बीचमा विवाद उत्पन्न गरेको छ।, सिकार मध्ये एक। हाम्रो पोडकास्टको यो नयाँ एपिसोडमा व्हाट्सएप समस्या र हप्ताको अन्य समाचारहरू, के तपाईं यसलाई मिस गर्न लाग्नुहुन्छ?
हामीले अघिल्लो सीजन शुरू गरेझैं यस वर्ष एक्टुलिडाड आईफोन पोडकास्ट हाम्रो YouTube च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष पछ्याउन सकिन्छ र पोडकास्ट टोली र अन्य दर्शकहरूसँग च्याट मार्फत यसमा भाग लिन सकिन्छ। हाम्रो च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् पोडकास्टको प्रत्यक्ष रेकर्डिंग कहिले सुरू हुन्छ भनेर सूचनाहरू प्राप्त गर्न, साथ साथै हामीले यसमा प्रकाशित गरेको अन्य भिडियोहरू थप्दा पनि। अवश्य पनि, यो आईट्यून्समा पनि उपलब्ध रहन्छ ताकि तपाईं यसलाई सुन्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं पोडकास्टहरूको लागि आफ्नो मनपर्ने अनुप्रयोग प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।। हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं ITunes मा सदस्यता लिनुहोस् en iVoox वा भित्र Spotify त्यसोभए एपिसोडहरू उपलब्ध हुने बित्तिकै स्वचालित रूपमा डाउनलोड हुन्छन्। के तपाई यसलाई यहाँ सुन्न चाहानुहुन्छ? ठीक तल तपाईंसँग यो गर्न खेलाडी छ। हामीसँग पनि छ एप्पल संगीतमा प्लेलिस्ट पोडकास्टमा बजाउने संगीतसँग (हो, हामीसँग यो पनि छ Spotify...)।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन समाचार » पोडकास्ट » १० × P० पोडकास्ट: आईओएस १ and र नयाँ आईफोनहरूको लागि तयार हुँदै
डिज्नीले Hulu को पूर्ण नियन्त्रण लिन्छ